Dayactirka kombiyuutarka daaran laakiin waxba shaashadda kama muuqdaan - Ikkaro
Inicio >> Dayactirka >> Kumbuyuutarkeygu wuu daaraa laakiin waxba shaashadda kama muuqdaan
Marka hore iska hubi inaadan haysan USB, cd, taleefan casri ah, saacad, fitbit, ama qalab kale oo ku xiran kumbuyuutarka. Haddii aad haysato wax isku xiran oo aan ahayn jiir, kumbuyuutar iyo kuwa ku hadla, ka saar oo isku day inaad markale bilowdo. Marar badan ayaan ilaawnaa wax ku xiran oo haddii aan leenahay BIOS loo qaabeeyey inay ka soo baxdo disk dibedda ah waxay isku dayeysaa inay fuliso oo waxay siisaa qaladka.
Haddii aad jeceshahay dayactirka noocan ah, iska hubi tan furid taleefan casri ah oo shaashad jaban.
Waxaan hubinaa in shaashadu shaqeyneyso. Waxay u egtahay dibi dhac, laakiin waa wax la iska tuurayo. Maaddaama guuldarradii aan ka wada hadalnay, kumbuyuutarku wuu shaqeeyaa, wuu bilaabmaa, markaa waxay noqon kartaa in wax walba ay si fiican u shaqeynayeen laakiin shaashadda ayaa waxyeello gaadhay.
Tijaabinta waa mid aad u fudud, ku xir laptop ama qalab kale oo leh HDMI ama haddii kormeeraha uu leeyahay telefishan, iskuday inaad aragto inuu shaqeynayo iyo in kale. Caadi ahaan waxaan heli doonnaa farriin la'aan, taasna waxaan horeyba u ognahay in khalad shaashad meesha laga saaray.
Haddii qayb kasta oo RAM ah oo aad ku xidhnayd waxyeello ama si liidata isku xidho, maxaa yeelay way soo baxday, sababtoo ah wasakh ayaa jirta oo xidhiidh fiican lama samaynayso, waxaan sidoo kale heli karnaa dhibaatadan.
Nadiifi boodhka, waxa ugu fiican ayaa leh hawo cufan leh iyo haddii aan ku fiicnaanno burushka ka-hortagga. Laakiin burushka caadiga ah sidoo kale wax dhibaato ah kuma yeelan doontid.
Beddel qaybaha modullaha. Isku day iyaga mid mid si aad u aragto haddii ay ku fashilmaan.
Kaarka sawirada ama GPU
Xulashada xigta waa garaafka. Waa inaad ka saartaa, ku nadiifi isku xirnaanta buraash oo mar kale tijaabi haddii ay shaqeyso.
Kahor intaadan iibsan jaantus kale, weydii saaxiib mid hore si aad u hubiso inay runti tahay waxa qaldan.
Sida loo hagaajiyo garaafka
In kasta oo aysan ujeeddada maqaalkani ahayn waxaan ka tagayaa tilmaamo yar yar.
Hadduu waxyeello gaadhay, nadiifi marawaxadda oo si fiican u kululee, ka saar oo beddel koollada kuleylka ah. Eeg haddii ay jiraan qayb xaalad xun ku jirta oo la beddeli karo ama iibiye xun.
Ugu dambayntiina haddii aynaan ka dhigi karin inay shaqeyso waxaan tixgelin karnaa dib u qaboojinta taas oo aan ku bari doono inaan ku sameeyo maqaal kale.
Cilad-Baadhista Motherboard-ka oo Tilmaamaysa
Motherboard-yada waxay leeyihiin cilad cilad ah oo ay noogu sheegaan waxa aan shaqeyneyn. Waxaa lagu arki karaa laydhadhka badhanka korontada, in kasta oo waxa ugu fudud uu yahay dhawaaqa, dhawaaqa uu soo saaro markay dhibaato jirto.
Haddii wax walboo hagaagsan ku socdaan kombuyuutarkeena, dhawaq ayaa la maqlaa kombuyuutarkuna wuu sii shaqeeyaa.
Haddii ay wax dhacaan, wuxuu ku dhawaaqayaa sida ay isugu xigaan, 2 dhawaaq, 2 dheer iyo mid gaaban, 3 dhawaaq, iwm. Taasna waxaan ku ogaaneynaa qeybta kumbiyuutarka qaybteedu
Hadda, dadka badankood waxay internetka ka raadsadaan ogaanshaha codka waxayna bog kasta ka helaan macno kala duwan oo dhawaaqyada ah. Tani waa sababta oo ah waxay kuxirantahay BIOS-ka aad haysato.
Marka habka saxda ah waa:
Raadi waxa motherboard aad haysato. Markaad fiiriso, ama sababtoo ah waxaad haysataa sanduuqa aad keydisay ama qaansheegad iibsasho ah.
Markaad heysato, kala soo bax Buugga saxankaaga raadinta Google (tusaalaha noocaaga saxanka ah Nooc feyl ah: pdf)
Kadib raadso meesha uu khaldan yahay. Waxaan ka raadiyaa pdf dhexdeeda erayga "beep" sidaa darteed waxaan badanaa ku arkaa ilbiriqsiyo gudahood.
Sidan ayaad ku hubineysaa in baaritaanka nabdoon ee u dhigma qaladkaaga
Mararka qaarkood, sida xaaladdaydu tahay, kumbuyuutarku ma sameeyo wax dhawaaq ah maxaa yeelay ma laha qalab dhawaaqa. Taarikooyin badan ayaa isku dhafan laakiin kuwa kale ma aha, waxay ku soo galeen sanduuqa anigana waan keydiyey.
Haddii isla wax kugu dhacaan, raadi, weyddiiso saaxiib mid ama soo iibso mid had iyo jeer wanaagsan in gacanta lagu hayo ama lagu dhajiyo kumbuyuutarka. si aad u ogaato halka la dhigayo, fiiri saxanka meesha ay ku qoran tahay dhawaaqa.
3 Kaarka sawirada ama GPU
3.1 Sida loo hagaajiyo garaafka
4 Cilad-Baadhista Motherboard-ka oo Tilmaamaysa